Top 5 Amadolobha With The yasebusuku Kuhle EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Amadolobha With The yasebusuku Kuhle EYurophu
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 28/03/2021)
Ukuhamba ukubona izinto ungumuntu omkhulu - kodwa kuthiwani uma ufuna ukuba ujabule? Ngaleso sizathu, kukhona imizi nightlife engcono, nokuthola lapho ngesitimela kulula futhi engabizi.
Ukuze izilwane party, akukho into efana uhlangabezana nightlife idolobha elisha. Into engcono mayelana nikwenza Europe ukuthi yonke imizi has a umuzwa ezahlukene. Bheka phezulu 5 amadolobha kanye nightlife engcono ubone ukuthi iyiphi uyayijabulela kakhulu:
1. Yasebusuku Berlin sika, Germany
Uzothola iBerlin Phezulu 5 Amadolobha kanye nightlife engcono ngesizathu. Umuzi ine a elizwakalayo okukhulu Clubbing yesehlakalo okusho engenakuqhathaniswa Europe. IBerlin iheha abaningi abanomqondo ofanayo izilwane zephathi. Yingakho kungcono cishe isiqinisekiso kubo bazijabulise kwelinye amakilabhu yayo eminingi. Berghain nakanjani i-nightclub edume kakhulu yedolobha, kanye okukhethekile kakhulu futhi okunye, angasho okuhle kakhulu eYurophu. Uma isitshalo amandla, manje kungcono eshayeka of Berlin sika Clubbing yesehlakalo. Awukwazi angifisi ngokuvakashela uma ufuna isikhathi esikhulu! Ngenhlanhla, ekufinyeleleni Berlin ngesitimela kulula - ungathola khona kusuka Amsterdam, London, futhi Frankfurt, phakathi kwezinye amadolobha.
2. Amsterdam sika Nightlife, le Netherlands
Amsterdam ingenye yamadolobha adinga idumela lalo njengoba omunye the best yokuzijabulisa. Kuyinto ethandwa uya khona, ikakhulukazi abathandi trance, techno, hip hop, indlu ezijulile, futhi EDM. Ezinye ezibaluleke kakhulu izindawo ukuvakashela kukhona Warehouse ka-Elementenstraat futhi Sugar Factory. Omabili ahlala avela amakilabhu omkhulu ukuya emaphathini at, kuye ngokuthi yini oyithandayo. Enye into nakanjani - amaqembu kukhona zasendle. I amakilabhu ungavali kuze 3 noma 4 a.m., ngakho kunensada isikhathi sokujabulela. Finyelela Amsterdam ngesitimela kusuka kunoma iyiphi enkulu amadolobha aseYurophu like Berlin, Paris, London, futhi Brussels.
Esikhathini eScandinavia abandayo, kokubili bendawo kanye izivakashi ukwazi indlela inhlangano. Stockholm kuyinto phakathi kwemizi ne nightlife engcono ngenxa ezihlukahlukene amakilabhu futhi izixuku ezinkulu kuzo. Ikhishi yesihogo iyindawo awukwazi miss e Stockholm, ngakho-ke qiniseka ukuthi kuhlole. Leli dolobha kalula safinyelela ngesitimela namanye ujantshi Izikhumulo European.
Isibhakabhaka ERoma esiyingqayizivele mlando sithuthukisa izinga Clubbing emzini. Quintessentially Italian, isipiliyoni Clubbing e Rome has a ezithile ekuphileni-onothando, charm abayitoho kuso. Big umdanso emabhilidini, bartenders friendly, kanye nomkhathi kumnandi ukwenza nightlife ERoma engavamile. Enye yezingxenye ezinhle kakhulu mayelana nokuvakashela i-Italy wukuthi kukhona inala ugibele isitimela. Abakwazi ukuthola wena kuphi ufuna ukuya. Ezinye zazo zizokuphatha ekubukeni okuhle endleleni.
London has a ezahlukene Clubbing yesehlakalo ukuthi asibeke phakathi kwemizi emihlanu phezulu ne nightlife kakhulu eYurophu. Ungavakashela nightclub bubuhle, imibukiso Burlesque, amakilabhu Retro, futhi noma yini phakathi. Kuyinto enhle kakhulu edzilini, nokuthola eLondon ngo isitimela iyatholakala kusukela emadolobheni baseYurophu ezinkulu. Ungaphuthelwa London isipiliyoni Clubbing!
Ulungele uhambo lwakho party-efuna olandelayo? Top Zethu 5 Amadolobha ne yasebusuku Kuhle eYurophu ngeke ukuphoxe, ngisho uma wavakashela kubo phambi. Ukubhuka amathikithi akho isitimela futhi kumnandi ukuba ujabulele nomculo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#club London nightlife Party amathiphu isitimela travelamsterdam phungingland travelgermany travelnetherlands